Nin lagu xukumay xabsi ka dib gudniin | Somaliska
Nin Masri ah ayaa 2 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lagu xukumay ka dib markii uu guday 9 wiil si sharci daro ah. Kiiskaan ayaa ah markii ugu horeysay ee maxkamadi ay xukunto qof guday wiilal. Sidoo kale ninkaan ayaa lagu eedeeyay in uu guday wiilasha si ka soo horjeeda caafimaadka asagoo qaarkood dhaacay, khaarna si saxa aan u gudin. Ninkaan ayaa la ganaaxay in uu siiyo wiilka uusan si fiican u gudin 14000 00 karoon, halka la amray in uu siiyo 4,600 karoon labada wiil ee uu dhaawaca gaarsiiyay. Sharciga Sweden ee 2001dii ayaa dhigaya in gudniinka ay sameyn karaan oo kaliye dadka haysta ogolaanshaha gudiga caafimaadka ayagoo loo ogolyahay in ay gudaan wiilasha ka yar 2 bilood. Dhaqaatiirta oo keliya ayaa loo ogolyahay in gudaan wiilasha da'doodu wayntahay. Ninkaan oo da'diisu tahay 50 jir ayaa horey u haystay ogolaansho uu wiilasha ku gudi karo balse gudiga caafimaadka ayaa ka qaadey waqti hore ka dib markii ay ka shakiyeen awoodiisa.
Nin Masri ah ayaa 2 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lagu xukumay ka dib markii uu guday 9 wiil si sharci daro ah. Kiiskaan ayaa ah markii ugu horeysay ee maxkamadi ay xukunto qof guday wiilal.
Sidoo kale ninkaan ayaa lagu eedeeyay in uu guday wiilasha si ka soo horjeeda caafimaadka asagoo qaarkood dhaacay, khaarna si saxa aan u gudin. Ninkaan ayaa la ganaaxay in uu siiyo wiilka uusan si fiican u gudin 14000 00 karoon, halka la amray in uu siiyo 4,600 karoon labada wiil ee uu dhaawaca gaarsiiyay.
Sharciga Sweden ee 2001dii ayaa dhigaya in gudniinka ay sameyn karaan oo kaliye dadka haysta ogolaanshaha gudiga caafimaadka ayagoo loo ogolyahay in ay gudaan wiilasha ka yar 2 bilood. Dhaqaatiirta oo keliya ayaa loo ogolyahay in gudaan wiilasha da’doodu wayntahay.
Ninkaan oo da’diisu tahay 50 jir ayaa horey u haystay ogolaansho uu wiilasha ku gudi karo balse gudiga caafimaadka ayaa ka qaadey waqti hore ka dib markii ay ka shakiyeen awoodiisa.